NDỤ ỌRỤ SSD - SSD - 2019
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-eme mkpesa "Taskbar" na Windows 10 anaghị ezo. Nsogbu dị otú a dị nnọọ mma mgbe otu ihe nkiri ma ọ bụ usoro na-agbanye ihuenyo dum. Nsogbu a anaghị ebu ihe ọ bụla dị egwu n'onwe ya, ma ọ bụghị na ọ na-apụta na nsụgharị nke Windows. Ọ bụrụ na panel ahụ egosipụtara gị mgbe niile, n'isiokwu a ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ngwọta maka onwe gị.
Zoo "Taskbar" na Windows 10
"Taskbar" nwere ike ghara zoo n'ihi ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ ngwụsị usoro. Ịnwere ike ịmalitegharịa idozi nsogbu a. "Explorer" ma ọ bụ gbanwee panel ahụ ka o wee zoo ya mgbe niile. Ọ dịkwa mma ịtụle usoro maka iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro faịlụ dị mkpa.
Ikekwe n'ihi ihe ụfọdụ otu faịlụ dị mkpa mebiri emebi n'ihi usoro ọdịda ma ọ bụ ngwanrọ nje, ya mere "Taskbar" kwụsịrị na-ezo.
Pinch Nweta + S ma banye na nchọta ọchụchọ "cmd".
Right pịa "Iwu Iwu" wee pịa "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Malite iwu na igodo Tinye.
Chere maka njedebe. Ọ bụrụ na achọtara nsogbu, usoro ahụ ga-agbalị idozi ihe niile na-akpaghị aka.
Usoro 2: Malitegharịa "Explorer"
Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ọdịda, mgbe ahụ ịmalitegharịa ọzọ "Explorer" kwesịrị inye aka.
Kpido nchikota Ctrl + Shift + Esc ịkpọ Njikwa Task ma ọ bụ ịchọ ya,
ịpị igodo Nweta + S ma tinye aha kwesịrị ekwesị.
Na taabụ "Usoro" chọta "Explorer".
Họrọ usoro a choro ma pịa bọtịnụ ahụ. "Malitegharịa ekwentị"nke dị na ala nke windo ahụ.
Nzọụkwụ 3: Ntọala Taskbar
Ọ bụrụ na nsogbu a na-ekwukarị ugboro ugboro, mezie panel ahụ ka o wee zoo.
Kpọọ menu ihe di n'ime "Taskbar" na imeghe "Njirimara".
N'otu mpaghara ahụ, kpochie igbe ahụ "Pin Taskbar" ma tinye ya "Na-ezochi ...".
Tinye mgbanwe, wee pịa "OK" imechi windo.
Ugbu a ị maara otú e si edozi nsogbu ahụ n'enweghị nsogbu "Taskbar" na Windows 10. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dị nnọọ mfe ma ọ dịghị achọ ihe ọmụma ọ bụla. Nyocha usoro ma ọ bụ malitegharịa "Explorer" kwesiri iji dozie nsogbu ahụ.